Siday tahay in markan Dowladda Federaalka ay u wajahdo maamulka Somaliland..? | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Siday tahay in markan Dowladda Federaalka ay u wajahdo maamulka Somaliland..?
Siday tahay in markan Dowladda Federaalka ay u wajahdo maamulka Somaliland..?
Inta aanan u gelin sida ay tahay in markan loo wajaho maamulka Somaliland ee Soomaali-diidka, Aan marka hore wax ka iraahdo ereyo ay waayadan caadeysteen qaar ka mid ah dadka Soomaalida, gaar ahaan dadka ku abtirsada bahda warbaahinta. Ereyadaasi oo wax u dhimayo midnimada, wadajirka dalka iyo waliba dareenka dadka Soomaalida ee walaalaha ee ay waayadani ku socdaan shirqoolada baahsan.
Sidan soo sheegeyba, Waxay dadka qaar caadeysteen isticmaalka ereyada “Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo kuwa la mid ah”, Kuwaasi oo loola jeedo marka laga hadlayo Dowladda Federaalka iyo maamulka Soomaaliland balse loo dhigayo sida labo dal oo kala duwan oo kale, halkii ay ahayd in mid walbaaba loogu yeero magaca uu wato maadaama waxa laga hadlayo ay yihiin maamullo marxaladdan dhisan.
Waa wax lala yaabo runtii in magacii Dowladda Federaalka laga dhigo sida magac daleed oo kale ama loo sawiro inay tahay dowlad ay leeyihiin dadka reer Koonfureedka. Taana waxay ka hor imaaneysaa qaabka ay u dhisan tahay iyo mandate-ka ay haysataba. Dowladda Federaalku, ma ahan dowlad ay iska leeyiihiin qabaa’il gaar ah ama dad ka soo jeeda deegaanno gaar ah. Bal waa dowlad guud oo ay ku wada jiraan Soomaali oo dhan.
Waxaa sidoo kale wax laga xumaado ah in magacii maamulka Soomaaliland isagana laga dhigo sida magac daleed oo kale. Taasi oo runtii noqoneysa jahli iyo aqoondarro baahsan. Soomaaliland, ma ahan dal madaxbanaan bal waa maamul la mid ah maamulada kale ee dalka ka jira sida Xarakada Al-shabab, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo waliba kuwa la midka ah. Waana sababtaasi sababta keentay in la aqoonsan waayo.
Tan iyo markii dalka laga ceyriyey gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga waxba iskama badalin qaabkii uu Caalamka u yaqaannay dalkeenna. Taana waxaa u daliil ah safaaradaha maanta ka furan Muqdisho oo ah caasimadda wadankeenna. Waxaa kaloo daliil ah qaabka ay saxaafadda Caalamka uga hadasho arimaha gudaha dalkeenna oo aadan marna ku arkeynin wax la yiraahdo Soomaaliya iyo Soomaaliland, iyadoo waliba la og yahay waxa ka dhex jira gudaha dadka Soomaalida.
Tan kale, ma waxay idin la tahay in Caalamku uusan ka warqabin taariikhda dadka Soomaalida ? Sidoo kale, ma waxay idin la tahay inaan lala socon kala duwaanshaha ka dhex jirta gudaha dadka reer Waqooyiga oo qaarkood aad uga soo horjeeda riyadan ay wareejinayaan Muusa Biixi iyo Faysal Cali Waraabe ? Ma waxay idin la tahay in Aduunyadu aysan la socon in Soomaalidu ay yihiin mujtamic qabali ah, islamarkaana kor ka ah hal qoys oo weyn !
Anigu, waxaan qabaa inaan loo baahneyn isticmaalka ereyada “Soomaaliya iyo Soomaaliland” maadaama ay dhaawacayaan midnimada iyo wadajirka dadka Soomaalida iyo dalkooda. Waxaan kalo qabaa in lagu kaaftoomo isticmaalka magacyada ay sitaan maamulada dalka ka jira oo ah halka mar walba loo dan leeyahay. Maxay tahay sababta loogu baahan yahay sheegidda magac daleed hadiiba laga hadlayo maamullo dhisan ?
Ugu danbeyn, waxaan ku talinayaa in la joojiyo isticmaalka ereyadaasi aan faa’iidada lahayn. Waxaan kaloo ku talinayaa in cadow loo arko qof kasta oo ereyadaasi isticmaala dantuu doonaba ha ka lahaadee. Ma aqbali karno runtii in horteenna lagu kala qeybiyo dalkeenna. Waxaana ugu baaqayaa hay’adaha sharciga ee Dowladda Federaalka inay talaabo ka qaadaan dadka isticmaala ereyadaasi, gaar ahaan kuwa ku jira warbaahinta.
Haddii aan dib ugu soo laabto dulucda qormadeyda oo aan kaga waramo sida ay tahay in markan loo wajaho maamulka Soomaaliland ee Soomaali-diidka ah. Kaasi oo si toos ah u caddeystay sida ay uga go’an tahay kala dhantaalidda midnimada iyo wadajirka dadka Soomaalida iyo dalkooda, Iyadoo waliba loo marayo waddo kasta oo ay ku jirto xittaa taageeridda dal doonayo inuu boobo dhul Soomaaliyeed si un looga helo dalkaasi wax un ictiraaf ah !!
Sidan soo sheegeyba, maamulka Soomaaliland ayaa maalinba maalinta ka danbeysa ku sii adkeysanayo kala goynta dalka iyo dadka Soomaalida, Isagoona u marayo wasiilo kasta oo la heli karo. Waxayna arintu gaartay heer ah in uu la safto dal cadow ku ah dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda federaaliga ah. Dalkaasi oo waliba haysto dhul iyo dad Soomaaliyeed oo uu siiyey gumeystihii Ingiriiska.
Intaa kuma eka, Ee waxa uu maamulka Somaliland wadaa caburin baahsan oo ka daran xittaa tii lagu eedeyn jiray taliskii Maxamed Siyaad. Taasi ku habsaneysa qof kasta oo Soomaali ah, Kaasi oo laga dareemo jaceyl Soomaalinimo iyo waliba muujinta astaamaha qaranka sida calanka buluugga oo kale. Halka cayda qabaa’isha, aflagaadada madaxda, ka been-sheegidda taariikhda iyo waliba caga-juleynta ay iska noqotay wax caadi ah.
Tusaale ahaan, waxaa deegaanadaasi ka lumay dareenkii Soomaalinimo ee ay astaanta u ahayd midnimada iyo wadajirka, Halka uu dhinaca kalena kobcay jaceylka loo qabo Xabashida iyo kuwa maamula. Ilaa ay arintu gaartay heer ah in la isbarbardhigo wiilka Soomaaliyeed iyo midka Xabashiga ah. Taasi oo calaamad u ah heerka uu gaarsiisan yahay naceybka jira. Ma jirto Soomaali heerkan gaartay xagga xumaanta xittaa marka lagu daro xiligii Gumeystayaashii reer Yurub.
Intaa waxaa ka daran dagaalada uu Maamulkaasi wado, Kuwaasi oo uu ku doonayo inuu ku qabsado dhul hor leh oo aan laga rabin aragtidiisa gurracan. Waxaana dagaaladaasi ka mid ah kuwa uu ku qaaday maamulka Puntland ee la dariska ah. Dagaaladaasi oo ay ku dhinteen dad badan oo Soomaali ah oo u badan ciidan u shaqeynayey labadaasi maamul. Halka dhinaca kalena ay ku barakaceen dad badan oo aan waxbo galabsan !!
Mar haddii ay arintu heerkan gaartay, Islamarkaana ay qatar ku jirto midnimadii iyo madaxbanaanidii dalka, Iyadoona dhinaca kale aan lala jaanqaadi karin marxaladdan cusub ay Soomaalidu mareyso. Taasi oo runtii u baahan wajiyo cusub iyo qalbiyo cusub oo nadiif ah oo aysan ku jirin cuqdado gaamuray oo waqtigoodii la soo dhaafay. Hadabo, waa maxay sida ay tahay in markan loo wajaho maamulkan Soomaali-diidka ah ?
Anigu, markii aan waxyaabo badan indho-indheeyey anigoo waliba wax ku saleynayo aqoonta aan u leeyahay kuwa majaraha u hayo maamulkaasi oo ah runtii kuwa fogaaday gaar ahaan xagga Soomaalinimada iyo wadajirka. Markii aan qiimeeyey meesha ay hadda taagan yihiin shaqsiyaadka horsocda maamulkaasi sida Muusa Biixi oo kale. Ugu daneyn, waxaa ii soo baxday in markan loo baahan yahay in maamulkaasi loola dhaqmo si ka duwan sidii hore.